Logitech Speaker Stand for iPad, sehatra haino aman-jery miaraka amin'ireo mpandahateny | Vaovao IPhone
Logitech Speaker Stand for iPad, sehatra haino aman-jery miaraka amin'ireo mpandahateny
Ny mijoro na mijoro dia tokony ho iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny finday avo lenta sy ny takelaka. Androany izahay manome anao filokana tsara natao ho an'ny iPad izay hahafaly ireo rehetra mandany atiny multimedia.
El Mitsangana ny mpandahateny Logitech dia fijoroana ho an'ny iPad manolotra mpivady kabary 6W RMS hanomezana feo stereo tsara ho anay mozika, lalao ary sarimihetsika.
Satria ny famakiana magazine dia tsy mitovy amin'ny filalaovana lalao na ny fijerena sarimihetsika, ny Logitech Speaker Stand for iPad ahafahantsika mihodina ny fitaovana hametrahana azy amin'ny toerana marindrana na mitsangana araka ny mety amintsika. Andininy mahaliana iray hafa atolotray antsika ity fanohanana ity dia ny fisafidianana ny zoro hijerena mba hisorohana ny fisaintsainana manelingelina
Mba hisorohana ny fahaverezan'ny bateria, ny Logitech Speaker Stand for iPad mahatonga antsika hiasa amin'ny fiantsonan'ny fiampangana ka raha mbola mampiasa ilay takelaka isika dia ho vonona foana ny bateria. Ny fitaovana dia mety voampanga na dia efa maty aza ireo mpandahateny, izay mahatonga azy io ho tonga lafatra rehefa tonga ny fotoana hatoriana sy hifohazana miaraka amin'ny bateria amin'ny vidiny 100%.
Na dia ny Logitech Speaker Stand aza dia vokatra natao manokana ho an'ny iPad, afaka manararaotra azy amin'ny loharanom-peo hafa koa isika toy ny Smartphone na mpilalao MP3. Ho an'ity dia manana input audio isika amin'ny alàlan'ny jack 3,5mm izay ahafahantsika mampiasa ireo mpandahateny amin'ny fitaovana hafa ankoatry ny iPad.
El Ny vidiny ofisialin'ny Logitech Speaker Stand dia 49,99 euro na dia misaotra an'i Amazon aza ianao dia afaka mahazo azy amin'ny vola kely lavitra izay tena manandanja tokoa amin'ireny fotoana ireny. Raha mbola tsy manana mpanohana ny iPad-nao ianao dia mety hiatrika ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra eo amin'ny tsena.
Amazon: Logitech Speaker hijoro ho an'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Logitech Speaker Stand for iPad, sehatra haino aman-jery miaraka amin'ireo mpandahateny
Miasa ve io fitaovana io nefa tsy mifandray amin'ny herinaratra?
Mamaly an'i dani
Avereno jerena ny MiniDock avy amin'i Bluelounge: charger rindrina tsy misy tariby ho an'ny iPhone